Network challenge – @mmunited
contest Network challenge steemit steempress
Initially I adapted this contest from @paulag. Now I want to change somethings in this challenge. I will asked the question I really want to now about it. The steemians who answer the questions will getafew rewards from @steem-bounty. Do you think you areasuccessful steemian in Steemit? If your answer is …
Network challenge steemit steempress
Yesterday I has surfed on steemit and I found2interesting posts that motivate me. The first one is written by @tarazkp. ready-to-give-up-earning-vests While everyone is waiting for higher prices to post, I am hoping to earn some Vests in the meantime. I am going to keep building the relationships, keep grinding away and keep …
ဒီတစ်ပတ်ကတော့ ဒုတိယ အပတ်ပါ။ ပထမအပတ်ကတော့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ https://steemit.com/steempress/@mmunited/introductiontooneuponedownsteemitnetworkingchallenge-p9d6fdxu8k အပတ်တိုင်း သောကြာနေ့မှာ project prometheus ကို upvote လုပ်မှာဖြစ်ပြီး တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ Steemit networking challenge ကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မေးခွန်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာ ဘယ် ဇတ်လမ်းကို အကြိုက်ဆုံးပါလဲ။ ဘာ့ကြောင့်ပါလဲ။ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များ အပေါ်ကမေးခွန်းကိုဖြေပေးပါ။ ကိုယ့် comment ရဲ့အပေါ်က comment တစ်ခုကို upvote လုပ်ပေးပါ။ Reply လုပ်ပေးပါ။ သူ့ရဲ့ blog ကို သွားကြည့်ပြီးတော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပိုစ့်တွေ့ရင် upvote လုပ်ပေးပါ။ ကိုယ့် comment ရဲ့အောက်က comment တစ်ခုကို upvote လုပ်ပေးပါ။ Reply လုပ်ပေးပါ။ သူ့ရဲ့ blog …